Mpitandro ny filaminana nihoa-pefy Nandratra tovovavy 24 taona
Araka ny didy navoakan’ny HCC sy ny CENI dia nahazo filoham-pirenena vaovao isika, hoy ny mpahay lalàna Willy Razafinjatovo na Olala. Hita ho nisy fahamehana teo amin’ny CENI.
Fitsarana an-tampony Ho afa-bela ve i Andry Rajoelina ?
Betsaka ny fanontaniana mipetraka eo anivon’ny fiarahamonina mahakasika ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina, indrindra mahakasika ireo raharaha nahavoarohirohy azy izay mipetraka eo anivon’ny Fitsarana an-tampony (HCJ).
Kaominina Antananarivo Renivohitra 49 miliara ariary ny tetibola 2019
Lany teo anivon’ny filankevitry ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ny tetibola hampiasain’ny kaominina amin’ity taona 2019 ity.
Delegasion’ny CNaPS sy ny Faritra Betsiboka Niarahaba manokana an’i Rivo Rakotovao
Nifanesy noraisin’ny Filoham-panjakana mpisolo toerana Rivo Rakotovao teny amin’ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra ny Delegasionina mafonja avy amin’ny Faritra Betsiboka sy ny avy amin’ny orinasam-panjakana CNaPS omaly zoma 11 janoary maraina.
Ny alin’ny zoma 14 desambra teo, tokony ho tamin’ny 10 ora alina, raha ny fitantaran’ny tompona toeram-pisotroana iray etsy Ambohipo, no nitrangana fanakorontanana nataona mpitandro ny filaminana maromaro, tokony ho 20 isa tao amina toeram-pisotroana iray.
Araka ny fanazavany, polisim-pirenena izy ireo, nanao bemidina ary namoaka ireo mpanjifa. Nisy iray tamin’izy ireo no nihoa-pefy ary avy hatrany dia nanainga latabatra sy ny zava-pisotro teo amboniny ary nandratra nonona tovovavy iray ny vakin’ireo zava-pisotro. Nahita ny zandry vavin’ny tompon’ilay toeram-pisotroana nilalao telefaonina ihany koa avy eo ny iray tamin’ireto mpitandro ny filaminana ireto ka nahavita naka sary ny zava-niseho ary saika hisintona ilay finday. Nony tsy nanaiky ilay tovovavy vao 24 taona dia nodarohan’ireo mpitandro ny filaminana roalahy ary safotra. Nanamarika moa ny tompon’ity toerana ity fa tokony hikatona amin’ny 10 ora alina tokoa ny toeram-pisotroana eny an-toerana ary efa tsy namoaka toaka intsony tokoa izy ireo rehefa tonga io ora io fa namoaka tsikelikely ireo mpanjifa kosa. Ny nahagaga azy ireo ihany koa dia nisy Bar marobe hafa mbola nivoha taorian’ny tamin’ny 10 ora alina saingy tsy voakitika. Nisy iray aza mbola hitany nivoha tamin’ny 1 ora maraina raha iny izy hamonjy fodiana avy any amin’ny hopitaly iny. Andrasana ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny polisim-pirenena.